Homeसमाचारआज नायक निखिल उप्रेतीको जन्मदिन, HAPPY BIRTHDAY लेख्नुस !
May 15, 2019 Spnews समाचार Comments Off on आज नायक निखिल उप्रेतीको जन्मदिन, HAPPY BIRTHDAY लेख्नुस !
चर्चित नायक निखिल उप्रेतीको आज जन्मदिन परेको छ । १९७५ मे १५ तारिखका दिन उनको जन्म सर्लाही पिपराभित्तामा भएको हो । यस आधारमा उनी आज आफ्नो ४४औं जन्मदिन मनाउँदैछन् ।
‘पिँजडा’ चलचित्रबाट नेपाल रजतपट प्रवेश गरेका निखिलको वास्तविक नाम दिनेश उप्रेती हो । निर्माता कलाकार पवन मैनालीले उनको नाम ‘निखिल’ राखिदिएका हुन् । हालसम्म उनले ९७ वटा चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् ।
नेपाली चलचित्र उद्योगमा एक्सनलाई स्थापित गर्नेमा निखिलको प्रमुख भूमिका रहेको छ ।
फिल्मी करियर सुरु गर्नुअघि मुम्बईमा अभिनय र स्टन्ट गरेका निखिल त्यसपछि पनि पाँच वर्षसम्म मुम्बईमै बलिउड फिल्मका लागि संघर्षरत रहे । अहिले उनी नेपालमै श्रीमती सञ्चिता लुइँटेलसँग बस्दै आएका छन् ।
अभिनय सँगसँगै निखिल चलचित्र निर्माण र निर्देशनमा समेत लागेका छन् ।
HAPPY BIRTHDAY लेख्नुस !
आज नायक निखिल उप्रेतीको जन्मदिन
आज चर्चित कलाकार दयाहाङ् राईको जन्मदिन, HAPPY BIRTHDAY लेख्नुस !
April 14, 2019 Spnews समाचार Comments Off on आज चर्चित कलाकार दयाहाङ् राईको जन्मदिन, HAPPY BIRTHDAY लेख्नुस !
आज चर्चित कलाकार दयाहाङ् राईको जन्मदिन । राई को जन्म घर भोजपुर हो । उनी नेपाली चलचित्रका अभिनेता हुन् । उनले चलचित्र लूटबाट प्रसिद्धि कामाएर लोक प्रिय बनेका थिए । दयाहाङ् राईका अलावा आजकै दिन शिवहरी पौड्याल, […]
सुपरस्टार अनमोल केसीको आज जन्मदिन, HAPPY BIRTHDAY लेख्नुस !
March 30, 2018 Spnews मनोरञ्जन Comments Off on सुपरस्टार अनमोल केसीको आज जन्मदिन, HAPPY BIRTHDAY लेख्नुस !
चर्चित स्टार अनमोल केसीको आज जन्मदिन परेको छ । अनमोलकी आमा सुस्मिता बम्जनले शुक्रबार बिहानै अनमोलको जन्मदिन भएको भन्दै ‘बर्थ डे विस’ गरेकी छन् । विकिपिडियामा अनमोल केसीको जन्मदिन २१ सेप्टेम्बर १९९४ भएको उल्लेख छ […]
हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको आज जन्मदिन, HAPPY BIRTHDAY लेख्नुस !
May 12, 2019 Spnews समाचार Comments Off on हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको आज जन्मदिन, HAPPY BIRTHDAY लेख्नुस !
हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको आज जन्मदिन । २०३१ वैशाख २९ गते ताप्लेजुङको खेबाङमा गजुरेलको जन्म भएको हो । उनी आफ्नो ४५औं जन्मदिन मनाउँदैछन् । जन्मदिनमा आइतबार बिहान उनले फेसबुकमा स्टाटस र फोटो हालेका छन् । […]